‘दाङमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले खानेपानीको अभाव झेल्नुपरेको छ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘दाङमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले खानेपानीको अभाव झेल्नुपरेको छ’
‘दाङमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले खानेपानीको अभाव झेल्नुपरेको छ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 23, 2018	0 148 Views
जिल्ला खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख
गर्मीको मौ सम बढ्दै गएको छ । बढ्दो गर्मीकै कारण खडे री पनि उत्तिकै बढिरहे को छ । खडे री बढ्दा पानीका स्रो तहरु घट्दै गएका छन् । दाङमा पनि पानीको स्रो त घट्दो अवस् थामा रहे को सरो कारवालाहरुले बताइरहे का छन । त्यसै त दाङ सुख्खा क्षे त्र हो  । त्यसमा बढ्दो पर्यावरणीय असन्तुलनले पानीका मुहान दिनप्रतिदिन सुक्दै गइरहे का छन् । यसै सन्दर्भमा दाङमा खाने पानीको अवस् था, उपभो क्ताको पहुँच र अभाव पूर्तिका लागि भइरहे का प्रयासका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले जिल्ला खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख चो कप्रसाद धितालसग गरे को कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
दाङमा खाने पानीको अवस्था के छ ?
खाने पानीको हिसाबले दाङ सुख्खा क्षे त्र नै हो  । सुख्खा क्षे त्र भएकै कारण यहा“का पहाडका मूलहरु पनि सुक्दै गइरहे का छन् । यहाका खो लानालाहरुमा पनि पानी सुक्दै गएको दे खिन्छ । सुख्खा क्षे त्र भए तापनि हामीले उपलव्ध स्रो तहरुलाई सदुपयो ग गरे र र यिनीहरुको व्यवस् थापन गरे र खाने पानी से वा प्रवाह गरिरहे का छौ ं ।
जिल्लाका सबै ले स् वच्छ खाने पानी पाएका छन् त ?
अहिले सम्मको आ“कडा हे र्दा दाङ जिल्लामा करिव ७५ प्रतिशत जनतालाई खाने पानी से वा पुगे को दे खिन्छ । तर शुरुमा स् यालो ट्यूवे लहरुको समे त जो डे र त्यो आंकडा दे खिएको हो  । खासगरे र पाइप वितरण गरे र व्यवस् िथतरुपमा पानी पुगे को आ“कडा त घट्छ । ५० प्रतिशत बढी जनताले व्यवस् िथत पानीको सुविधा अझै पाउन नसके को अवस् था छ ।
काकाकूलको अवस्था छ उसो भए ?
काकाकूल अवस् था त छै न । तर व्यवस् िथतरुपमा घरको पहुचमै खाने पानीको सुविधा पाउनलाई अलिकति समस्या नै छ ।
व्यवस् िथत पानी उपभो क्तासम्म पु¥याउन के ही यो जना ल्याउनु भो ?
अहिले दाङ जिल्लामा सञ्चालित आयो जनाहरुमध्ये साना शहरी खाने पानी आयो जनाअन्तर्गतका तीनवटा आयो जना छन् । जुन घो राही, लमही र तुलसीपुरमा छन् । ती सम्पन्न भइसके र पनि से वा आरम्भ भइसके का छन् । यसै गरी सहलगानी खाने पानी आयो जनाअन्तर्गत उपभो क्ताहरुको ३० प्रतिशत र सरकारको ७० प्रतिशतको सहभागितामा अहिले दुईवटा आयो जनाहरु नारायणपुर र सर्रा खाने पानी आयो जनाहरुको निर्माण कार्य भइरहे को छ । त्यसै गरी भरतपुर खाने पानी आयो जनाको डिपीआरको अन्तिम तयारी हुदै छ भने तराई मधे श खाने पानी सुधार आयो जनाअन्तर्गत ५२ वटा आयो जनाहरु जिल्लामा सञ्चालित रहे का छन् । कुनै को धे रै काम भइसके को छ भने कुनै भर्खर यो वर्षदे खि शुरुवातको प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै उच्चस्तरका खाने पानी आयो जनाअन्तर्गत ४३ वटा आयो जनाहरु दाङ जिल्लामा सञ्चालित रहे का छन् । तराई मधे श र उच्चस् तरका आयो जना संख्याको हिसाबले बजे ट न्यून छ ।
त्यसै कारणले पनि हामीले काम सो चे जसरी अघि बढाउन सके का छै नौ ं । त्यस्तै गरे र यो वर्ष सुख्खा क्षे त्र खाने पानी आयो जनाअन्तर्गत के ही दिनमा तुलसीपुरको ३ नं. वडा बल्ले , नाउला, प्रतापको टतिर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहे को छ । जहा“ पानीकै स्रो त छै न । तलबाट लिफ्ट गरे र पठाउनुपनेर् अवस् था छ ।
निर्माणाधीन यो जना बन्न कति समय लाग्ला ?
धे रै यो जना छन् । सरकारले पनि बजे ट चाहि“ एकै वर्ष दिन सक्ने सम्भावना दे खिदै न । त्यसै ले सरकारको एउटा यो जना तीन वर्षमा सम्पन्न गनेर् नीति नै छ । तर बजे ट अभावको कारणले पा“च÷छ वर्षसम्म लाग्ने गरे को छ । त्यसै ले बजे ट समयमा दिने र प्रशस् त बजे ट विनियो जन हुने हो भने एउटा प्रो जे क्ट हामीले तीन÷चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्छांै  ।
यो जना बन्ने तर के ही समयमै बन्द हुने समस् या पनि छ नि ?
पहिले –पहिले सरकार आफै ले मात्रै यो जनामा पै सा लगाउ“थ्यो  । सरकारी पै साले मात्रै खाने पानी यो जना बन्थे  । सरकारले यो जना बनाइदिने र उपभो क्तालाई हस् तान्तरण गरिसके पछि उपभो क्ताले अपनत्व नलिने अवस् था रहे को थियो  । जसले गर्दा जति दिन चल्छ त्यति दिन पानी प्रयो ग गनेर् त्यसपछि यो जना लथालिंग हुने अवस् था थियो भने अहिले त्यो अवस् था छै न । किनभने हामीले शुरुदे खि नै सम्भाव्यता अध्ययनदे खि नै उपभो क्ताहरुलाई सहभागी गराउ“छौ ं र निर्माणको चरणमा पनि उपभो क्ता समितिले अनुगमन गर्छ । उपभो क्ता स् वयंले ३० प्रतिशत लगानी गरे को हुन्छ । त्यस् तै जिल्लास् तरका आयो जनाहरुमा २० प्रतिशत लगानी हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो लगानी हुने भएकाले उपभो क्ताहरुले पनि अपनत्व महसुस गरे का छन् । उपभो क्ताहरुले खाने पानीको महत्व बुझिसके का छन् । पहिले को जस् तो लथालिंग भएको जस् तो पनि छै न । सानातिना के ही समस् याहरु दे खिए पनि यो जनामा कुनै त्यस् तो लथालिंग हुने अवस्था छै न ।
यो जनामा हुने कमिशनखो रले पनि समस् या आएको हो कि ?
अहिले त्यस् तो छ“दै छै न । किनभने अहिले बने का खाने पानीका यो जनाहरुमा निर्माणका कामहरु हे नेर् हो भने अरु कार्यालयको भन्दा कामको गुणस् तर राम्रो छ र त्यस् तो खालको गुनासो उपभो क्ताहरुको पनि छै न । हामीले सके सम्म कामको गुणस् तर र समयमै काम सकियो स भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका हुन्छौ ं । हामीले उपभो क्ता समितिहरुलाई पनि भने का हुन्छौ ं कि कुनै काम तपाइ“हरुले हे र्नुस कुनै काम बिग्रियो भने तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्नुस् । हामीले एकै चो टि सयबढी यो जना हे र्न सकिदै न । यो तपाइ“हरुको यो जना हो  । बिग्रियो भने तपाइ“हरुको बिग्रिन्छ । त्यसकारण हामीलाई तुरुन्तै खबर गर्नुस् र बिग्रिएको छ भने तुरुन्तै भत्काइदिनुस् । बरु फे रि बनाइन्छ भने र हामीले उपभो क्ताहरुलाई सचे त गराएका हुन्छौ ं । त्यसै ले पनि यस् तो गुनासो आएको छै न ।
यो जनासगै पानीका स्रो त संरक्षणका काम के गर्नुहुन्छ ?
सानातिना मुहानहरुलाई हामीले संरक्षण गरिरहे का छौ ं । हामीले शहरहरुमा दीर्घकालीन यो जनाका रुपमा हामीले घो राही, तुलसीपुर र त्यो बीचको क्षे त्रलाई लक्षित गरे र त्यहा रहे का खो लाहरुमा ठूला जलाशय निर्माण गर्ने कार्यक्रम शुरुवात गरे का छौ ं । जस् तै तुलसीपुर क्षे त्रका लागि पातुखो लामा ठूलो जलाशय बनाउने भने र डिपिआर बनाउन कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त भइसके को छ । त्यसै गरी ग्वारखो ला र कटुवाखो लामा जलाशय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अन्तिम तयारी भइरहे को छ ।
त्यस्तै मध्यकालीन यो जनाहरुअन्तर्गत ठूला शहरहरुमा जनसंख्या बढ्दै गएको हुनाले अहिले घो राही क्षे त्रका लागि धारापानी मन्दिरको नजिकै बबईतिर जलाशय बनाउने र त्यहा“ बो रिङ लगाएर धारापानीको माथि डाडामा पानी पु¥याएर त्यहाबाट फे रि घो राही बजारलाई खाने पानीको सुविधा पु¥याउने भने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दाङमा टो ली आइसके को छ । त्यस् तै तुलसीपुरका लागि शीतलपुर क्षे त्रको बबईबाट पानी लिफ्ट गर्नलाई त्यहा पनि एउटा टो ली आएर अध्ययन थालिसके को छ । यसरी हामीले खाने पानीको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहे को अवस्था छ ।
खडे रीको मौ सम छ । पानीको समस्या समाधानका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ ?
उपभो क्ताहरुको क्षे त्रबाट पानीको प्रयो गलाई जथाभावी नगर्नुहुन हाम्रो आग्रह छ । यतिखे र खाने पानीको समस् या जताततै छ । किनभने खडे रीको मौ सम छ । थो रै भए पनि पानी जो गाउन सकिन्छ कि भन्ने तिर सबै को ध्यान जान जरुरी छ । हामी सबै लाई पानी चाहिन्छ । पानीको प्रयो ग सबै ले गनेर् हो । तर मै ले चाहिने भन्दा बढी प्रयो ग गर्दा अर्काले खाने पानी पनि नपाउने अवस् था आउ“छ कि भन्ने कुरालाई सबै ले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।
Previous: गण्डकी विकास बैकको शाखा दाङमा
Next: चोकैपिच्छे शौचालय